कथा चमेलीको : छैन् नागरीकता, छैन आफ्नो घर | रेडियो फूलवारी १०५.४ मेघाहर्ज
Home समाचार कथा चमेलीको : छैन् नागरीकता, छैन आफ्नो घर
आफ्नो छोरा/छोरीसहित चमेली । तस्विर सौजन्य : जितेश कर्णको फेसबुकबाट
: November 20, 2016 : समाचार, स्थानियNo Comments
भाडावर्तन मस्काएर एक छोरा र एक छोरीको जर्को टार्नेमै संर्घषरत छिन् चमेली । हुनत् बास्तविक नाम चाहिं चमेली होइनन्, तर उनले उपहार स्वरुप पाएको नाम चमेली हो । अहिले उनीलाई यही नाउँबाट धेरैले चिन्ने गरेको छ ।
कमला नदिको पूर्वीय तटमा रहेको बसपिट्टाकी उनी अहिले सदरमुकाममै वेवारिसे अवस्थामा बस्दै छोराछोरीलाई हुर्काउनमा संर्घषरत छिन् । प्रेम विवाह गरेकी उनी सानै उमेरमा आमा बनिन् । १२÷१३ वर्षको उमेरमा एक भैंसी व्यापारीसँग प्रेममा परेकी चन्देश्वरी महतो घरबार छाड्न बाध्य भईन । गाउँलेहरुले चन्देश्वरीका प्रेमी बसपिट्टाका बरखु यादवलाई समात्यो । यादवले ‘चन्देश्वरी’को सवै भार आफूले उठाउने भनेपछि गाउँलेले दुवैलाई छाडेको थियो ।
चन्देश्वरीलाई ब्रहम्पुरीबाट लिएर बरखु तेनुवापट्टीमा बसे । १ वर्षजति बसेको बेला उनी गर्भवती भईन । अपरिपक्क उमेरकै कारण कुपोषणको शिकार छोराको जन्म भयो । जसलाई उनीहरु वर्षदिन सम्म मात्रै जोगाउ सके । र वर्षदिनमै छोराको मृत्यु वियोगमा उनीहरु भौतारिए । छोरोको अकालमै मृत्यु भएपछि दुवैजना निराश भएर फेरी ब्रहम्पुरीको बुरियाचाप गाउँ फर्किए । त्यहाँ केही महिना वसेपछि बरखुले आफ्नो मामा घर कमला नदिको छेउको पर्टेवा आईपुगे ।
आफ्नो मूलघर बसपिट्टा नगएर दुवैजना मामाघरमै (पर्टेवामा) बस्न थाले । त्यहाँ उनीहरु करिब ६ महिना जति बसे । त्यहाँबाट उनीहरु बसपिट्टाको बरेरबा चौकमा सरे । हुलाकी सडक अन्र्तगतको बरेरबा चौक भएरै सिरहा धनुषाका मानिसहरु कमला नदि तर्दै आवत जावत गर्थे, त्यही भएर बरेरबा चौक विस्तार हुँदै गईरहेको थियो । चौक बन्दै गरेको बरेरबामा बरखुले एउटा कटघारा(घुम्टी) थापे । त्यसमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको खरिदविक्री हुन थाल्यो । बरखु भैंसी व्यापारी भएकोले व्यवसाय गर्न पटक पटक निस्केपछि चन्देश्वरीले त्यो घुम्ती चलाउने गर्थिन् । त्यसवीचमा उनी पुनः दोस्रो पटक गर्भवति भईन् । शारीरिक रुपमा कमजोर र उमेर पनि परिपक्क नहुँदा दोस्रो पटक गर्भवती भएकी चन्देश्वरी बरखुको जीवनमा फेरी पीडा थप्यिो । नौ महिने बच्चा जन्मिनु अगावै मत्युवरण गर्यो ।
त्यसपछि चमेली र बरखु झन निराश भए, र त्यो घुम्टी छाडेर जिरोमाईल पुगे । त्यहाँ चमेलीका आमा र भाई ऐलानी जग्गामा बस्दै जिवनको जसोतसो गुजारा चलाउँथे । ‘उहाँले ब्रहम्पुरीमा रहेको ४ कट्ठा खेती योग्य र १० धुर घडेरी भाई रामसेवक महतो र आमालाई फकाई फुलाई बेच्यो ।’ उनी सम्झिन्छिन्,‘ भैंसी व्यवसाय गर्थे । त्यो बेचेको जग्गाको पैसा के गर्यो कसैलाई थाहा भएन । उहाँले नै आमा र भाईलाई जिरोमाईलमा ऐलानी जग्गामा बस्न लगाए ।’
जिरोमाईलबाट पहिलो पटक चन्देश्वरीलाई लिएर बरखु आफ्नो मूलघर बसपिट्टा पुगे । बसपिट्टा पुगेपछि बरखु फेरी भैंसी व्यवसायको नाउँबाट घरबाट निस्किने गर्थे । यस वीचमा बरखु र चमेलीले एक छोरी र छोराको जन्म दिइन् । बरखुले आफ्न्तकहाँ रजोखैर नाता पुड्ने गए । त्यहाँबाट अर्को आईमाई घर भित्राए । सौतेनी आएपछि चमेली र दुवै छोराछोरीलाई असजिलो भयो । त्यसैवीचमा बरखु व्यवसाय सफल नसप्रिएको भन्दै मुगलान (भारततर्फ) लागे । उनी गएको वर्षौ भएको छ तर कुनै खबर छैन् । यता अहिले किरण १२ वर्षमा पुगेकी छिन् भने प्रमोद ८ वर्षको भएको छ । बरखु गएपछि ४÷५ वर्ष मूलघरमा बसेका चन्देश्वर हातमुख जोर्न सदरमुकाम पस्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे । उता भित्र्याएको अर्को महिलापनि बरखु नआउँदा घर छाडेर गईन् । बरखुको प्रतिक्षामा अहिले पनि चन्देश्वरी, किरण र प्रमोद छन् । उनीहरु भन्छन,‘भारतको कुन शहरमा उनी विलाए, नत घरमा कसैलाई थाहाँ छ, न कुनै छिमेकीलाई ।…
यता आफूसहित छोरीछोराको खानपिन, लुगाफाटो जोड्नुपर्ने भार थपिएपछि चन्देश्वरी चमेलीमा परिणत भए । सदरमुकाम सिरहा छिरेकी उनी भन्छिन्,‘खेबाखर्च चाहिन्थ्यो । त्यसैले सिरहा आए ।’
सिरहा आएपछि उनी दुवै बालबालिका लिएर स्थानीय विभिन्न होटलमा काम गर्दै हातमुख जोड्न् र लताकपडाको वन्दोवस्ती गर्ने गरेको बताइन् । सुरुमा रिता होटलमा ३ वर्ष महिनाको ५ सयको हिसाबले जुठो थालहरु मस्काउन सुरु गरिन । त्यसपछि उनी करिब २ वर्ष खड्ग होटलमा १ हजार महिना पाउने गरी जुठो थाल र भाडाकुडा मस्काउन थालिन् । चमेलीले छोराछोरीलाई त्यही पैसाले गुजारा टार्ने गरेकी थिईन् । यसवीचमा चमेलीले छोरी किरणलाई स्थानीय जगदिश यादवको घरमा सफासुग्घर र भाडावर्तन मस्काउने गरी काममा लगाईन् । पेटभरी खाना लाउन दिने शर्तमा किरण त्यहाँ काम गर्न थालिन् । यस क्रममा किरणको पढाईले स्थान पाउन सकेनन् । र शिक्षा आर्जन गरी साक्षर हुनुपर्ने आजको युगमा उनी निरक्षर हुन पुगे । किरण भन्छिन,‘८ वर्षजति घरको काम गरेको छु । भाडाकुडा मस्काउने, घरआँगन सफासुग्घर गर्ने, लुगाफाटा धुन्थे । यसैबाट फुर्सद भएनन्, कसरी पढ्ने ?’
आफू पठ्न नपाएको गुनासो गर्दै भाई प्रमोदलाई पठाउने इच्छा तिव्र छ, किरणमा । तर आर्थिक अवस्था नाजुक र नत बस्ने घर छ नत कसैले कोठा भाडा दिन चाहन्छन्, त्यही भएर थप पीडामा छिन् किरण र चमेली । ‘छोराछोरी सानो हुँदा सडकबाटो छेउमै पनि रात विताउने गर्थे,’ चमेली सम्झिन्छिन, ‘तर अब छोरी विस्तारै ठूली हुँदैछे, कसैको कुनजर लाग्ला भन्ने डर ठूलो छ । कसरी ठूली हुँदै गरेकी छोरीलाई लिएर सडकबाटो छेउ सुत्ने ?’
पेटको अल्सरबाट पीडित उनी लामो समयसम्म जिल्ला अस्पताल सिरहामा उपचार गराएर जसोतसो काम गरेर जिविकोपार्जनमा जुटेकी छिन् । छोराछोरीको आवश्यकता पूरा गर्न उनी अहिले सिरहामै रहेको एक बमबम होटलमा काम गरिरहेकी छिन । भाडाकुडा मस्काउने कामको लागि महिनाको ५ हजार पाउँछिन्, उनी । त्यसैबाट दुवै छोराछोरीको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरेकी बताउँछिन् ।
उनीहरुलाई बस्ने समस्या भएको छ । सदरमुकाममा सस्तोमा कोठाभाडामा पाउँन नसक्दा छोराछोरी सहित सुरक्षित तरिकाले बस्न सकिरहेका छैनन् । कोठा भाडामा आफूलाई दिन नचाहेको उनीहरुको भनाई छ । चमेली भन्छिन,‘छोराछोरी असुक्षित छ । कोठा भाडामा दिनपनि यहाँका मानिस
दोस्रो समस्या : नागरीकता
प्रेममा परी घरवार विहिन चमेलीलाई छोराछोरीको सवैभन्दा वढी चिन्ता छ । पेटको अल्सरबाट आफू पीडित रहेको र कति समय बाँच्ने हो, ठेगान छैन भन्दै चिन्तित उनी आफूसँग नेपालको नागरीकता नभएको गुनासो गरिन् । नागरीकता नहुँदा केही सुविधा नपाउने कुरा सुनेकी उनी नागरीकताको लागि विभिन्न व्यक्तिलाई आग्रह गर्दै हिडेकी छिन् । आफूलाई नभएपनि छोराछोरीले कमसेकम नागरीकता पाउन सकोस भन्ने चमेलीको दृढ इच्छा छ । पति बरखु वेपत्ता भएपछि छोराछोरीलाई कसरी नागरीकता हुने हो ? उनी जान्ने बुझ्ने कहाँ धाईरहन्छिन् । उनी आफ्नो नागरीकता र छोराछोरीको जन्मदर्ताको लागि धाउँदाधाउँदै पैताला खिसिएको बताउँछिन् । चप्पल नलाउने उनी सनाखत गर्ने व्यक्ति कोहि नहुँदा नत नागरीकता पाउन सकेकी छन् नत छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन सकेकी छिन् । उनी भन्छ्नि, ‘पति बौरिए, अब कसरी हामीले नागरीकता पाउँने ?’
नागरीकताको लागि आवश्यक कागजागतमा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, गाविस÷नगरपालिकाको सिफारिस चाहिन्छ । तर उनीसँग केही छैन् । नत सनाखत बस्ने कोही छ । त्यसैले नागरीकता आफूले पाएपछि छोराछोरीलाई सहज हुने ठम्याईमा उनीलाई ठेस पुगेको छ । आमा र भाई रामसेवकसँग नेपाली नागरीकता रहेको चमेली बताउँछिन् । त्यसैको आधारमा भएपनि आफ्नो नागरीकता बनाईदिए हुन्थ्यो, चमेलीको चाहना छ । तर नेपालको कानुन दैवले जानुन भन्ने झैं भएको छ, चमेलीको लागि । पैसा र प्रभावमा धेरै विदेशीले नेपाली नागरीकता लिए तर यहाँकै मुलबासीहरु नागरीकताबाट बञ्चित भएको चमेली एउटा दमदार पात्र छिन् । दलहरुले दाबी गरे अनुसार विश्वको उत्कृष्ट यो संविधानले चमेलीलाई कतिको सहज तरिकाले नागरीकता उपलब्ध गराउँछ, त्यसबाट नेपालको संविधानको उत्कृष्टता प्रमाणित हुन्छ । र, दलहरु अहिले अंगीकृत नागरीकताको सवालमा अल्झेको छ । तर चमेली जस्ता हजारौं तराई मधेसका मुलनिवासीहरु यसबाट बञ्चित रहेको देखिन्छ ।
तेस्रो समस्या : छोराछोरीको पठनपाठन
चमेली आफू दुःख गरेपनि छोराछोरीलाई पठाउन चाहन्छिन् । तर समयले साथ नदिएपछि के लाग्छ । छोरी किरण १२ वर्षकी भईसकेकी छिन्, समान्य अक्षर चिन्ह पनि कठिन छ । किरण आफू पठ्न चाहेको र भाईलाई पनि पठाउन चाहेपनि असमर्थ भएको बताउँछिन् । जसोतसो भाईलाई स्थानीय एक नीजि विद्यालयमा पठाउनको लागि याचना गरेपछि प्रमोद ‘एलकेजी’मा पढ्दैछन् । तर प्रमोदको पढाईपनि सोचे जस्तो हुन सकिरहेको छैन् । ‘राम्रो पढाईको लागि पैसा चाहिन्छ,’ किरण भन्छिन, ‘हाम्रो अवस्था दयनिय छ । कसरी पैसा तिर्न सक्छौं ।’
‘विपन्नका बालबालिकालाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न राज्यले चर्को नारा दिएपनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन् । प्रमोद जस्ता हजारौं बालबालिका यसरी गरिबीको कारण गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्,’ स्थानीय युवा अरविन्द यादवले भने,‘प्रमोदलाई पठनपाठनको राम्रो वातावरणमा राखिए ऊ पनि भोली देशको लागि योगदान दिनसक्ने सक्षम जनशक्ति बन्न सक्छ । यसप्रति समाज र राज्यले सोच्नैपर्छ ।’
‘प्रमोद र किरण चर्चित व्यक्ति बन्न सक्छन् । त्यसको लागि राज्यले प्रमोद र किरणको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नसक्ने वातावरण बनाईदिनुपर्छ,’ उनले थपे ।
छोरी किरणको चिन्ता
पेटको अल्सरबाट जुझ्दै गरेकी चमेलीलाई छोरी किरणको चिन्ताले सताएको छ । विस्तारै ठूली भईरहेकी छोरीलाई शिक्षासँगसँगै विवाहको लागि अहिलेदेखि नै चमेली चिन्तित रहेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘समयसाल खराब है । बेटी हमर जवान भरहल है । ओकर शादिव्याह केनाके हेतै ?’
यो समस्याले चमेलीलाई खाना पनि निल्न समस्या हुने गरेको बताउँछिन् । अब हामीलाई कसले सहारा दिन्छ । ‘छोरा पठ्न चाहन्छ, आर्थिक अवस्था दुरुस्त र आफ्नो घर छैन । छोरी ठूली हुँदैछे,’चमेली भन्छिन्,‘राज्यले सहयोग गरिदिनुपर्यो ।’
संविधानमा नागरीकताको प्रावधान
नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरीकता सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा नागरीकता सम्बन्धीका प्रावधान यस प्रकारको छ ।
दफा १० को (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने
दफा ११को (१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ .
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
१२. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता ः यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।
BY Surendra Kumar Kamati